रवि लामिछानेको नयाँ पार्टी ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ले कमाल गर्ने संकेत, चुनाव लड्न टिकट लिने तरिका नै यस्तो कडा ! – Annapurna Post News
June 21, 2022 sujaLeaveaComment on रवि लामिछानेको नयाँ पार्टी ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ले कमाल गर्ने संकेत, चुनाव लड्न टिकट लिने तरिका नै यस्तो कडा !
काठमाडौं – सञ्चारक्षेत्रबाट खुला राजनीतिमा आएका पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने कसरी चुनाव जान्छन् भन्ने प्रतिक्षाको घडी समाप्त भएको छ । लामिछानेले नयाँ दल घोषणा गरेका छन्। उनले मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच आफ्नो दल घोषणा गरेका छन्। अहिले यो दलबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
लामिछानेले ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ घोषणा गरेका हुन्। उनले आफ्नो पार्टी नबनाई यो जर्जर व्यवस्था बबदल्न नसक्ने बताउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका हुन्।
पार्टी घोषणा गर्दै उनले भने, ‘यो जर्जर संरचना परिवर्तनका लागि नयाँ राजनीतिक पार्टीबाट अघि बढ्छु। म यो देशलाई चाहिएको जस्तो दल बनाएर अघि बढ्छु। नयाँ दल बनाएर, नयाँ म्यान्डेट दिन तयार भएर आएको छु।’ nउनले सबै राजनीतिक दलबाट अफर आएको बताउँदै आजको मितिसम्म दर्ता भएका कुनै राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्दा कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने बताए।
उनले थपे, ‘यो देशमा प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र राम्रा मान्छे नभएका होइनन्। तिनको सम्मान गर्न चुक्दिनँ। पार्टीभित्र धावा बोलेनन्। पर्खेर बसे। ठूलो नेताको मृत्युपछि त्यही पदमा पुग्ने आकांक्षा गरे। उमेर पुगेपछि वृद्धभत्ता पाइन्छ, सत्ता पाइँदैन।’ उनले सवै क्षमतावान स्वतन्त्रहरुलाई आफ्नो दलसँग जोडिएर उम्मेदवारी दिन आग्रह गरे। स्वतन्त्र भएर पार्टीमा रहन चाहनेका लागि आफूले विकल्प दिएको बताए।
आम निर्वाचनमा उठ्नका लागि पार्टीभित्र चुनाव हुने उनले बताए। उनले आफू क्षमता भएसम्म पार्टीमा बस्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको पार्टी हो। म क्षमता हुन्जेल यहाँ बस्नेछु, क्षमता नहुँदा नहुँदै र्‍याल चुहाउँदा चुहाउँदै म पार्टीमा बस्ने छैन।’ आफ्नो पार्टीबाट टिकट लिएर चुनाव लड्न भाषणले नहुने र जनताले वत्याउने स्पष्ट खाका (ब्लु प्रिन्ट) देखाउनुपर्ने अध्यक्ष रविले बताए । रविको पार्टीको प्रस्तावित चुनाव चिह्न घण्टी हो ।
भरतपुरमा विजय सुवेदीलाई झट्का, २२६ मतान्तरका साथ रेनु अगाडि